Ogaden News Agency (ONA) – Dadka shacabka ah ee lagu xasuuqay Gari-go’an xisaab ayaa ka dambayn
Dadka shacabka ah ee lagu xasuuqay Gari-go’an xisaab ayaa ka dambayn
27 May 2012 ayay ciidamada bahaloobay ee gumaysiga Itoobiya weerar ku qaadeen reer degenaa meesha loo yaqaan Gari-go’an.
Weerarkan sida waxshinimada ah loogu qaaday dad reer guuraa ah oo wax ay galabsadeen uusan jirin ayaa waxaa ku nafwaayay dad tiro badan, waxaana lagu la’yahay dad kaloo badan oo laga sii kaxaystay goobta.
Isgaadhsiinta dalka oo aad u xumayd awalba ayaa aagga uu ka dhacay xasuuqan laga jaray is-gaadhsiintii gaarka ahayd taasoo noo suura galiwayday inaan helo dhamaan magacyadii dadkii ku waxyeeloobay weerarkaa lagu xasuuqay dadka shacabka ah.
Hadaba waxaa soo gaadhay wakaaladda wararka ONA qaar ka mid ah dadkii lagu laayay xasuuqaas bahalnimada ah waxaana ka mid ah dadka aan ilaa hada helay magacyadooda;
Maxamed Xasan Abshir
Ina duwane ismaaciil kamas
Ina maxamed aflahaar
Aadan xasan kurcas
Maxamed sheekh cabdulaahi sheekhcali dhagood.
Waxaa kaloo jira dad gaadhaya ilaa iyo 15 ruux oo aan ilaa hada la ogayn meesha ay ku danbeeyeen iyo geel farabadan oo 200 aan ka yareyn sida naloogu sheegay oy ka kaxaysateen goobta dadka lagu laayay maxaysatada loo carbiyay xasuuqa dadka shacabka ah een waxba galabsan.
Arintan tiiraanyada leh ee ka dhacday degmada Gari-go’an ayay dadka la socda arimaha Itobiya guud ahaan gaar ahaan maamulka Cabdi iley ku macneyneeyeen inay ku lug leedahay banaabaxyadii iyo fadeexadii lagu sameeyay KT Meles socdaaladiisii uu ku tagay Mareykanka iyo Koonfur Afrika. Waxaanu ogsoonahay inay Itobiya maal farabadan ku bixisay sidii jaaliyadaha loo kala furfuri lahaa oo loo abuuri lahaa qaar daba-dhilif u ah Itobiya oo marka uu dhigayacabka Meles dibadda u soo boxo ku soo dhaweeya calanka Itobiya, taasoo la arkay in lagu fashilmay oo been aan jirin laga gadi jiray dhiigyacab Meles.
Sidoo kale CWXO ayaa dagaalo badan oo cadawga lagu naafeeyay ku qaadayay fadhiisamada gumaysiga uu ku leeyahay gobolada Dhagaxbuur iyo Qaridahare.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya waxay uga tacsiyaynayaan dhamaan shacabka S.Ogadenya gumaadka naxariis darada ah ee lagu hayo, waxayna u balan qaadayaan in dambiilayaasha ka dambeeya xasuuqa shacabka lala xisaabtami doono goor aan fogeyn. Jabhadda Wadaniga ayaa war-saxaafadeed rasmi ah ka soo saari doonta xasuuqan marka ay soo dhamaystirmaan wararka quseeya fal-dambiyeedkan.